शेयर हब १ बर्षमा प्रवेश , प्रयोगकर्तालाई ल्यायो आकर्षक अफर ।
आजदेखि शेयर हब एप १ बर्षमा पार गरेको छ।
लगानिकर्ताको समस्याको सामाधान गर्नको लागि बनेको एप् १ बर्ष पुग्दा सम्म प्ले स्टोरमा १ लाख ९२ हजार भन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको छ भने एप स्टोरमा ५० हजार भन्दा बढी पटक डाउनलोड भएको छ । लगानीकर्तालाई आबश्यक पर्ने सबै सुबिधा निशुल्क उपलब्ध गराएका कारण यो एप छिटै चर्चामा पुगेको हो।
हाल १ बर्ष पुगेको अबसरमा शेयर हबले प्रयोगकर्तालाइ आकर्षक छुट लिएर आएको छ। शेयर हबको प्रिमियम सुविधा लिदा प्रयोगकर्तालाई २० प्रतिसत छुट र फेसबुक पोस्टमा कमेन्ट गरेर रु हजार जित्न सकिने शेयर हबले जनाएको छ।
शेयर हब एपदेखि तपाईंले आफ्नो पोर्टफोलियो, वाचलिस्ट व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, र आफ्नो मनपर्ने स्टकको लागि प्रत्यक्ष मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइले विभिन्न सुबिधा निशुल्क प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ। अन्य समयमा शेयर हबको प्रिमिएम सुबिधा लिदा NEPSEBAJAR प्रोमो कोड प्रयोग गरि आकर्षक छुट पनि पाउन सक्नु हुनेछ।
कसरि पाउने २० प्रतिसत छुट ?
सर्बप्रथम प्ले स्टोर अथवा एप स्टोर देखि एप डाउनलोड गर्नुहोस।
एप डाउनलोड गरेपछि एप खोल्नुहोस।
एपको होम स्क्रिनमा रहेको profile बटनमा क्लिक गर्नुहोस।
त्यसपछि Subscription भन्ने अप्सन छान्नुहोस्।
त्यसपछि कति महिनाको लागि लिने हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस।
त्यसपछि आफुले पैसा तिर्न चाहाने माध्याम छान्नुहोस्। र Have A Promo Code ? मा क्लिक गर्नुहोस।
त्यसपछि प्रोमोकोडमा SHAREHUB हाल्नुहोस र प्रेसिड गर्नुहोस।